I-bumble bee jasper intsingiselo-Uhlaziyo olutsha lwe-2021 -Ividiyo entle
I-bumblebee jasper okanye i-bumble bee stone intsingiselo kunye neepristal zokuphilisa iipropathi. Ilitye leyaspisi leenyosi lihlala lisetyenziselwa ubucwebe njengeeringi, ubuhlalu, amacici, isangqa, isacholo somqala, kunye noburhabaxa.
Thenga i-bumble bee jasper yendalo kwivenkile yethu
Njengale nto i-orenji enemibala eqaqambileyo, emthubi, kunye nezinto ezimnyama ngokwenyani ezenziwe kumxube wentaba-mlilo yaseIndonesia kunye nentlenga. Iliwa eline-carbonate elityebileyo laqala ukufunyanwa kwisiqithi se Java ngee-1990s. Izinto eziphathekayo zithambile, kunye nobunzima be-Mohs be-5 okanye ngaphantsi. Kulula ukusika noku polisha eli litye linyukayo. Sisoloko sigcwalisa umngxunya nge-Opticon resin.
I-bumble bee jasper (okanye i-bumblebee) yinto edibanisa into, i-anhydrite, i-hematite, isalfure, i-arsenic, njl. Iipateni ezithandekayo kweli litye zihlala zilingisa imibala efumaneka kwii-bumblebees, kungoko igama. Umbala omthubi ubangelwa bubukho besalfure, obunetyhefu, njenge-arsenic, ke kufuneka unonophelo-hlamba izandla zakho rhoqo emva kokuphatha.
Inyosi yebaspi ayiyiyo ilitye leyaspisi
Umbala ophuzi uvela kumxholo ophezulu wesulfure
I-bumblebee jasper ilitye intsingiselo kunye neepristal zokuphilisa iipropathi
Inyosi yebusle yejasper crystal intsingiselo kunye neempawu zokuphilisa
Zeziphi iimpawu zokuphilisa i-jasper?
Yintoni i-bumble bee Jasper eyenziwe ngayo?
Ngaba i-jasper yebumble inqabile?
Ngaba i-bumble bee jasper idayiwe?
I-bumblebee ayililo ilitye leyaspisi kodwa igama linamathele kwizizathu ezahlukeneyo. Umbala weli litye leBumblebee uvela kwindibaniselwano yezimbiwa kunye nomcimbi wentaba-mlilo. Ukudibanisa i-anhydrite, ihemmatite, isalfure, kunye ne-arsenic kunye nezinye izinto, le jasper ibumblebee lilitye le-agate. Iipateni zahlukile kwaye ziyaqinisekisa ukuba akukho matye mabini ayafana ncam, enza ukuba inyosi e-bumple jasper ibe lilitye elithandekayo ukubandakanya nakuphi na ukubekwa kobucwebe.
Imibala emthubi efumaneka elityeni ivela kumxholo ophezulu wesalfure. Ngaphandle kobuhle beli litye, kungcono ukuhlamba izandla emva kokuphatha eli litye. Isalfure inokuba yingozi kwimpilo yakho. Kungcono ukonwabele eli litye ukude okanye ubucwebe obukhethekileyo obukukhusela ekuvezweni.
Ukuvela kwelitye kujongeka ngathi yiyaspisi engawusombululi umba wokunika igama. Lilitye elimangalisayo kunye nokongeza okungakholelekiyo nakuphi na ukuqokelelwa kobucwebe, nokuba kulilitye elimilisiweyo okanye kwikhabhathi. Sisebenzisa eli litye ukuhombisa amashishini kunye neeofisi.
Ilitye elinamandla lehlabathi. Ibandakanya ngaphakathi amandla ayo wentaba-mlilo evela kuyo.
Ilitye elingaqhelekanga. Yenziwa apho intaba-mlilo yavula khona emhlabeni. La matye aphakamisa zombini i-kopal kunye ne-solar pleras chakras.
I-solxus ye-solxus ikwanamandla i-chakra, kwaye ngokukhuthaza le ndawo inokuvumela ukukhula kumandla akho.
I-solar plexus ikwanxibelelene nokuzithemba. La matye ayaziwa ngokuncedisa ngokunyusa ukuzithemba.
I-bumblebee jasper intsingiselo ikhuthaza ulonwabo olupheleleyo kunye novuyo. Kukhuthaza ukubhiyozelwa kwamaxesha amancinci obomi. Ukukhuthaza ukunyaniseka, ngakumbi ngokwakho, kukunceda ufezekise amaphupha akho.
Bumble Bee Jasper, ephuma kwi-Indonesia video
Ukunika amandla. Ukukhuthaza ulonwabo olupheleleyo kunye novuyo. Kukhuthaza ukubhiyozelwa kwamaxesha amancinci obomi. Ukukhuthaza ukuthembeka, ngakumbi nesiqu sakho. Kukunceda ufezekise amaphupha akho. Iifree zavala amandla emzimbeni. Ukukhuthaza umsebenzi wengqondo. Kuyanciphisa iimpawu komzimba.
Igama lorhwebo. Igama lezorhwebo nge-calcite enemibala enemibala efumaneka kwiNtaba iPapandayan, eNtshona Java, eIndonesia. Izinto eziphathekayo zenziwe nge-calcite ekhulileyo e-fibrous nge-yellow, i-orange kunye ne-black banding.
I-bumblebee crystal yikristale enqabileyo kakhulu ene-gypsum, isalfure kunye nehematite. Kunzima kwaye kuyingozi ukuyifumana kuba umgodi ubekwe ngaphakathi kwintaba-mlilo eIndonesia.
Ayidayiwe. Umbala otyheli ubangelwa bubukho besalfure
Yasper yendalo ibumble iyathengiswa kwivenkile yethu yegem
Senza ubucwebe beyasper beyasper eyenziwe ngokwesiko njengamakhonkco okuzibandakanya, izacholo zomqala, amacici e-stud, izacholo, namacici… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.
Inyosi yebusle jasper 12.89 ct
Inyosi yebusle jasper 15.47 ct
Inyosi yebusle jasper 13.25 ct
Inyosi yebusle jasper 14.26 ct
Inyosi yebusle jasper 12.82 ct
Inyosi yebusle jasper 11.44 ct
Inyosi yebusle jasper 15.25 ct